Any Toamasina, mpitsabo fito marary : 25 ireo matin’ny pesta amin’ny tranga 141 nahina | NewsMada
Any Toamasina, mpitsabo fito marary : 25 ireo matin’ny pesta amin’ny tranga 141 nahina
Niaiky ny minisitra Andriamanarivo Lalatiana tany Toamasina fa tsy voafehy intsony ny pesta. Nanamarina koa ny tenany ny amin’ ireo mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana voan’ny pesta ka anisany ny talem-paritry ny fahasalamana sy ny “médecin inspecteur“. Manampy ireo ny dokotera maro ka misy mihitsy miaraka amin’ny zanany samy naiditra etsy amin’ny sampana misahana manokana ny aretin-tratra sy ny areti-mifindra ao amin’ny Hopitalibe Analankinina. Nidina ifotony ny minisitra, omaly, nihaona tamin’ny tomponandraikitra sy ireo mpiasan’ny fahasalamana ary ny talen’ny sampandraharaham-panjakana rehetra misy eto Toamasina sy ny manodidina.
Nambaran’ny minisitra fa noho ny asa mafy sy ny fiseraseran’ ireo mpitsabo amin’ny marary ny antony nahatonga ny fifindran’ny aretina amin’ ireo dokotera ireo. Efa misy ireo sitrana, ny sasany, mbola manohy fitsaboana. Hatramin’izao, 25 ireo maty raha 141 kosa ny nahitana fisehoan’ny aretina. “Amin’ny 141, nahatratra 70 ireo nahina ho voa ka ny 13 amin’ ireo kosa no azo antoka fa voan’ny pesta“, hoy ny fanazavan’ny minisitra hatrany.
Nambarany fa azo sitranina tsara ny pesta raha tsy misy fahatarana ny fahatongavana eny amin’ny hopitaly. “Ampy rahateo ny fanafody”, hoy izy.
20 ireo marary ao amin’ny Hopitalibe Toamasina
Nandritra ny fandalovana tao amin’ny faritra manokana fitsaboana pesta, fantatra fa 20 izao ireo tazomina ao amin’ny hopitaly ka mpiasan’ny fahasalamana ny fito amin’ izany. Nahatsikaritra ny mpanao gazety any an-toerana fa efa mametraka kidoro amin’ny tany ny mpikarakara ny marary hafa noho ny tsy fahampian’ny fandriana.
Nisy ny fanakianana ny mpanao gazety fa manome vaovao tsy marina. Resy lahatra tamin’ny fanazavana nentin’ny mpanao gazety ny minisitra noho ny tsy fisian’ny vaovao ofisialy avy
amin’ ireo sampandraharahan’ny fahasalamana. Vokany, natsangana avy hatrany ny vaomiera manokana misahana ny fandraisam-baovao ilain’ny mpanao gazety ka ny prefet-n’ i Toamasina, i Benandrasana Cyril, no mitarika azy. Hapetraka ihany koa ny
borigady manokana hisahana ny fanaraha-maso ny fivezivezena amin’ny fiarakodia sy ny taksiborosy ary ny fiaramanidina, sambo sy lakana, indrindra ny fitondrana razana.
Tsy mazava ny fomba fiarovana
Nanambara ny ministra fa tsy azo atao aloha ny mandoro tanety sy ny toerana feno voalavo. Mifanohitra amin’ izany anefa ny nataon’ny teo anivon’ny kaominina, ny zoma teo, izay nandoro ny tranon’ ireo 4’mis teny amoron-dranomasina. Lasa niakatra an-tanàna avokoa ireo voalovo be. Amin ‘izao fotoana izao, tondrahina ranom-panafody avokoa ireo sekoly sy toeram-piasana.